Umsebenzi womzimba kuyisici esibalulekile ekuthuthukiseni okuphelele kwengane. Ngabe kanjani futhi nini ukujwayela umdlalo? Abahlengikazi baphendula: kusukela ebuntwaneni, kodwa - uma nje kutholakala amaphuzu amathathu alula.
Ukuvivinya ingane kufanele kube lula. Kungcono ukuqala ngezici eziyisisekelo zezimoto - ukuqhuma, ama-squats, ukuhamba okusebenzayo nokusebenza okulula. Isifundo ngasinye kumele sihambisane nekhefu - kuzosiza umntwana ukuba aphinde athole amandla.
Indlela yezemidlalo yokuzivocavoca iyindlela engcono kakhulu yokugcina ukunakekelwa kwengane nokumkhuthaza ukuba afunde. Imincintiswano yama-Joke, ukulingisa ukuziphatha nokuzibonakalisa kwezilwane, imidwebo ye-situational iyokwakha ikhono "lokukhumbula ngekhanda". Ingane izokwazi: imidlalo ayisebenzisi nje kuphela, kodwa iyamnandi futhi iyathakazelisa.
Ukusungula okuningi - kungcono. Ikhaya lezemidlalo liyindlela enhle kakhulu kubazali abanakekelayo. Kodwa, uma isikhala endlini singekho, ungafaka izesekeli zakho ukushaja. Umbala omibalabala, amabhola aqhakazile wokuthungwa okuhlukene nobubanzi, izintambo zokudlula kanye nezindlebe zezingane yizinto ezincane ezidingekayo ezizobangela isithakazelo nenjabulo enganeni.
Indlela yokuhlela iziqu zezingane 2016: umbhalo, izinkondlo, izingoma
Indlela yokwenza i-albhamu yesithombe somntwana wengane?
Indima yamanzi ekudleni komuntu
Kunokuthi ugeze kanjani ilanga eliphansi
Ukufundisa ingane ukuba ikhabe
Ungenza kanjani amakolintshi amakhulu emaminithini angu-20?
Ukuthuthukiswa kocansi ngaphambi kwesikhathi
Isicelo samafutha ka-garlic
Ingulube nge sinamoni nesinaphi
Ukupheka kwabantu ukuphathwa kwe-angina
Izindlela zokupheka eziwusizo zezimbuzi zokugcoba izinwele